SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Hagayya 24, 2018 -
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Hagayya 24, 2018
SBO: Hagayya 24, 2018. Oduu, Gabaasaa Gumaacha Sabboontonni WBOf Taasisan ilaallatuu fi Araara ABO fi Mootummaa Itoophiyaa Jidduu irratti Yaada Ummataa.
← ONN: Oduu Olmaa Oromiyaa, Hagayya 24, 2018 Mootummaan Wayyaanee ifaaf ifatti waraana Oromia irratti labsee jira →
One thought on “SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Hagayya 24, 2018”
Gammadaa huseen jaarraa August 30, 2018
Gurmuulee Jaarmaya TBOY kan tahan Gurmuun SHamarran WBO fi Gurmuun D/WBO Walitti dhufuudhaan Ayyaana iida Arafaa kabajatan.
Hagayya 21-2018 waaree booda sa’atii 2:00pm-7:00pm tti ayyaana arafaa yeroo kabajatanitti ayyaana kana sababeeffachuudhaan walii galtee araaraa mootummaa itoophiyaa fi ABO gidduutti ta’e irratti hawaasaaf ibsoota bal’aa gochuufiidhaan gammachuu fi deggersa qaban ibsataniiru.
Haaluma kanaan haala yeroo ammaa ilaalchisee ibsaa fi waamicha hawaasa oromoo magaalaa sana’aa jiraatuuf gochuu fi akkasumas bu’aa ba’ii qabsoon keessa dabre waliif kan tuqan yammuu ta’u qooda fudhannaa shamarran qabsoo oromoo keessatti qabanii fi walumaa galatti yaadota cuunfaa tahan hawaasaa waliin irratti haasaa godhaniiru.
Dabalataanis qophii ijoollee fi walaloolee adda addaatiin ayyaaneffachaa Oolaniiru.
Gurmuuleen Jaarmaya TBOY kun diinagdee battalatti waltajjii ayyaanaa irratti argame tumsa qabsoo bilisummaa oromoof erga gumaachanii booda xumura irratti ibsa ejjennoo qabxii jaha(6)Of keessaa qabu baafachuun goolabataniiru.
1, Bilisummaa Ummata Oromoo dhugoomsuuf qabsoo Addi bilisummaa oromoo karaa kamiinuu godhuuf deggersa guutuu kan qabnuu fi dirqama keenya dacha dachaan bahuuf murteeffanne.
2, ABOn rakkoo siyaasaa mootummaa itoophiyaa wajjin qabu karaa nagayaatiin furuuf itti jiru dinqisiifachaa,waan nurraa barbaachisu hundaan cinaa kan dhaabbannu ta’uu ibsanna.
3, Wabii QBO kan ta’e WBO yeroo kamuu caalaa waan dandeenyuun cinaa ni dhaabbanna.
4, Jijjiiramni yeroo ammaa empaayra itoophiyaa keessatti gootota qabsaa’ota ilmaan Oromoo tiin mul’ate akka lafa qabatuuf qabsaa’onni Oromoo akka gamtaan hojjetan dhaammanna.
5, Olola maqa balleessii dhiheenya kana lixa oromiyaatti maqaa WBO tiin saamichi geggeeffame jedhee afarfamaa jiru soba dhugaa irraa fagaate tahuu waan hubannuuf gadi fageenyaan kan balaaleffannu tahuu ibsanna.
6, Ajjeechaa suukanneessaa maqaa daangaatiin ummata keenya irratti geggeeffamaa turee fi ammas itti jiru ni balaaleffanna.
Gurmuu Shamarran WBO fi
Gurmuu Damee WBO irraa
Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti.